बहुमतको दुरुपयोग: जन्मियो निरंकुश एकात्मक सरकार ! « Postpati – News For All
बहुमतको दुरुपयोग: जन्मियो निरंकुश एकात्मक सरकार !
बिमल राज डाँगी । राजतन्त्रको अन्त्य गरेर, संघीय लोकतान्त्रिक राज्य ब्यबस्था आएको भर्खरै हो । विभिन्न राजनैतिक उतारचढावका बिच पाँच बर्षका लागि कम्युनिष्टको बहुमतको सरकार आएको छ ।
तर बहुमतको दुरुपयोग गरि, जनताले रुचाएको कम्युनिस्ट सरकार निरंकुश बन्ने खतरा देखिएको छ ।
दुई तिहाइ सरकार र प्रतिपक्ष सरकार बिच भिडन्त भैरहेको छ । उक्त संघर्ष त्यति घनिभुत र कठोर नबने पनि सरकारको निरंकुश शैलिका कारण सदनमा विवाद जन्मिएको संकेत दिएको छ ।
युद्ध लडेका केही नेताहरुको जिद्दी स्वाभाबले होला, सरकारमा उनिहरु ज्यान नै बाजिराखेर भएनी आफ्नो अडान पूरा गरेररै छोड्ने पक्षमा छ्न । अहिले बहुमत सरकारको सदनले जे चाह्यो त्यही पारित भएर छाड्छ, अनि प्रतिपक्षमा बस्नेहरुको निरीह भुमिका देखिदै छ, अस्तित्व हिन भैरहेका छन ।
कम्युनिस्ट सरकारको शासन पद्धतिलाई हेर्दा लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन, निरंकुशताको अभ्यास भैरहेको अनुभुती दिन्छ ! लोकतन्त्रको आवरणमा तानाशाही प्रवृत्ति जबर्जस्त हुर्की रहेको देख्न सकिन्छ ।
प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसले सदनमा राख्ने प्रस्तावहरु कम्युनिस्ट सरकारले कुनै सुनुवाइ नगर्ने हो भने सदनमा निरीह भएर बसिरहनुको के औचित्य होला ? बरु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बिप्लवको सरकार झै सडकबाट संघर्ष गर्दै आफ्नो सत्ता निर्माण गर्ने हिम्मत राख्न सक्नु पर्छ । यदि यो हिम्मत प्रतिपक्षमा रहेको ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसले राखेन भने सम्झनु एकात्मक निरंकुशता आयो भनेर ।
यो सरकारलाइ जुन कोणबाट हेर्दापनि जनताको सरकार हैन मन्त्रीहरुकै सरकार चलिरहेको छ । आखिर जनताकै लागी सरकार चलाएको भए, दुइतिहाइ बोकेको सरकारले पारित गर्न लागेको शिक्षा विधयकको किन बिरोध गर्ने ? यदि जनतालाइ त्यो पारित भएसि जनतालाई मार पर्छ भन्ने कुरा काग्रेसलाई थाहा छ र काग्रेसले बिरोध जनाएको हो भने जनताको सरकारले जनतालाई नै घात गर्ने कस्तो सरकार ? प्रश्न गम्भीर छ ।
सरकारमा रहेका मन्त्री, नेताहरुले भोलिका दिनहरुमा जनताबाट के आस गर्ने ? अनि जनताले अहिले सरकारमा रहेका नेताहरुबाट के आश गर्ने ?
काग्रेसले पनि सरकारमा हुदा आफ्नो औकात देखाइ सकेको छ । काँग्रेस सरकारमा हुँदा आज सरकारमा हुने कम्युनिस्टहरुले सत्ता पाए देशलाई रातारात परिवर्तन गर्छौ भन्नेहरुको हालत पनि देखियो । सत्ताहातमा आइसकेपछि देश बिकाश तिब्रतामा किन बढेन ? भन्ने प्रश्न उनिहरु माथी उठ्दा, जादुको छडी हैन, बिस्तारै हुन्छ बिकाश भन्न थालेका छन । यिनिहरु प्रतिपक्षमा बस्दा बाँडेका सपना र आक्रामक प्रस्तुतिहरु अहिले सत्तामा पुगेपछी किन निरीह भए ? जनता माझ यहि प्रश्न उब्जिएको छ ।
दुई तिहार सरकारले निर्मलाको हत्यारा अहिले सम्म पत्ता लगाउन सकेन । उल्टै हजारौं निर्मलाहरु दिन रात मृत्यु भैरहेको तथ्यांक आइरहन्छ । एउटा निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्ने निकम्मा सुरक्षा ब्यबस्थाको कारण कैयौ बलात्कारका घटनाहरु प्रोत्साहित हुने गरेका छन । बलात्कारीहरु खुलमखुल्ला घुमिरहेका छ ।
न्याय सुसासनको सपना बाँड्ने केपि ओलिको सरकारले अब निर्मलालाई न्याय कहिले दिन्छ ?
निर्मला हत्यारा पत्ता लगाउने बहानामा विभिन्न आयोग तथा समितिहरु निर्माण गरेर, राज्यको ढुकुटी सिध्याउने कार्य भएको छ, त्यही भ्रष्टाचार मौलाएको छ ।
जाँदा जाँदै एउटा सुजाव, प्रतिपक्ष बलियो नहुंदा सरकारमा बसेकाहरुले आफुखुसी विधेक बनाउदै, पासगर्दै लाभ लिंदै जाने र प्रतिपक्ष भनिनेहरु एक-दुई दिन संसदमा उफ्रिने तर सडक संघर्ष गर्न डराउनुले केही हुनेवाला छैन ।
जनताको आँखामा छारो हाल्न र प्रतिपक्षमा छौ है भनेर जनाउ दिने औपचारिकता मात्रै निभाउने भद्दा मजाकले केही उपलब्धि हुनेवाला छैन, बरु आबस्यक परे कठोर संघर्षमा जान सक्ने हिम्मत लिन सक्ने बिप्लबको नेकपा नै ठिक छ, कमसेकम भ्रष्टाचारी, कालोबजारी, तस्करीहरुलाई मोसो दलेर तह लगाएको छ ।
यदि यो देशमा एकात्मक तानासाही निरंकुशता जन्मिएकै हो भने काँग्रेसले पनि बिप्लव संग बन्दुक बोक्न तयार हुनुपर्छ । देशको राजनीति घटना परिघटनालाई हेर्दा बिप्लवले बोकेको मुद्दा जायज देखिन्छ, फलस्वरूप, जनता बिप्लव प्रती आकर्शित बन्दै गएका छन ।